Orinasa mpamokatra fandefasana metaly tsy misy fefiloha ao Shina
Home / Induction Melting Furnace / Fitrandrahana vy / Lafaoro fanalefahana tsy misy fotony matetika
Indostrian'ny famokarana hafahafa matetika
Sokajy: Electric Furnace, Fandoroana fanalefahana amin'ny famokarana tavy, Induction Melting Furnace, Afo Fandoroana vy, Fitrandrahana vy Tags: Hividy lafaoro fandevenana tsy misy fotony, Mividiana ny hafanam-pandrefesana hafanana hafanana, mpanamboatra fofona mainty, ny vidin'ny fandefasana koveta, Fitrandrahana fitrandrahana tsy misy fotony, Afofandiofana hafahafa midadasika, Ny hafanam-pandrefesana hafahafa, Afofandiofana hafanana hafanana, serasera, MFA tsy misy fefy, MFA tsy misy fefy fandefasana roapolo, MF ny vidin'ny fandefasana koveta
Fitrandrahana tsy fahampian-tsolosim-barotra matetika | Induction Iron Steel Corless Fitrandrahana
1) Afofandiofana mahazatra hafahafa
2) rafitra fanaraha-maso nomerika feno tanteraka
3) Famolavolana vy, vy, vy, vy, aliminioma
4) 0.15-20 capacity
5) Fiatombohan'ny herinaratra, fampiasana haingana, fahombiazan'ny famokarana herinaratra.
6) Fehezam-borona fantsom-batom-piraofanana, fametahana hydraulika.
3.Usage: Ny haavon'ny hafanam-pandrefesana matevina tsy ampiasaina amin'ny ankapobeny ampiasaina amin'ny vy, vy, varahina, aliminioma sy legioma, dia miteraka fihenan-tsakafo, tsara ny famatsian-tsakafo, tsara ny fitambaran'ny singa tsara, ny fahaverezan'ny brenimena, ny haavon-tsetroka mora, ny fanaraha-maso mora foana, dia mety amin'ny karazan-metaly isan-karazany.
4.Characters sy Advantages:
1) Fiatombohan'ny herinaratra, fampiasana haingana, fahombiazan'ny famokarana herinaratra.
2) Ny fanombohana ny fihenan'ny tendance niverimberina dia mampifanaraka ny fepetra ilaina matetika.
3) Fiarovana fiarovana tanteraka, toy ny fiarovana amin'ny safidin'ny safidy, ny fiarovana amin'ny overspolita, ny fiarovana amin'ny fotoana voafetra, ny fiarovana amin'ny alàlan'ny baiko, ny fiarovana ny rano, ary ny fiarovana amin'ny alàlan'ny fiarovana, ny fiara dia mihazakazaka amim-pahamendrehana eo ambany fiahian'ny fiatrehana haingana.
4) Mora miasa, mety ho an'ny fizahana rehetra.
Ny fotoana fandrendrehana ny lafaoro tokana dia mety ho haingana toy ny <40 minitra! ny tanjaky ny lafaoro dia tonga hatrany amin'ny fanjakana avo indrindra (≧ 0.96)!
Mandritra ny fofona, tsy maninona ny fiovaovan'ny toeram-ponenana ao anaty lafaoro, ny famatsian-tseraseran'ny fampitam-baovaon'ny serivisy foana ny famokarana herinaratra. Izany hoe, raha tsy misy ny fanitsiana manitsy ny mpandika lalàna, ny dingana manontolo amin'ny fitsotsahana hatramin'ny farany, ny fametrahana herinaratra matetika dia afaka manome ny hery fara-tampony ho any amin'ny lafaoro.
Endritsoroka ara-tsosialy be loatra (fifanarahana amin'ny 530 kwh / T). Raha oharina amin'ny angona angovo mandeha amin'ny angovo mandeha amin'ny angona angona manodidina ny 20%.
Mitadiava ny tontolon'ny fandrindrana iraisam-pirenena sy ny lanjany azo omena lanja!
Amin'ny fampiasana andiam-pifanarahana herinaratra feno angovo, ao anatin'ny dingana iray manontolo ny dingan'ny fifandimbiasana dia eo amin'ny toeram-pitsaboana feno (mitovy amin'ny diplaoma mpanodina diode), tsy mamorona harmonica avo lenta, tsy misy loto manimba ny tambazotra herinaratra, tsy misy fiantraikany amin'ny Ny fiasan'ny kapila manara-maso ny kapila manerantany.
Ny famolavolan'ny kodiaran-doko inductive dia mety hampihena ny fahaverezan'ny kodiarana.
Ny fahaverezan-danjan'ny induction indraindray dia ny 25% amin'ny hery tanteraka, ka ny zava-dehibe indrindra ny famolavolana ny siansa sy ny vahaolana. Rehefa nanaovany ny coil, dia mandany ny avo lenta TU1 anoxic varahina amin'ny aluminium varahina, ary ny coil mpiray mandany brazing volafotsy avo, izay manana conductivity avo sy ny fatiantoka kely. Mba hahazoana antoka ny fandrefesana tsara indrindra, ny fitaovana fanondan-dàlana dia apetraka eo anelanelan'ny tapa-bolana;
Fiarovana azo antoka sy tontolo iainana
Ny fifantenana ny singa avo lenta mba hahazoana antoka ny fahamarinan'ny fitaovana.
① Fiatoana tsy misy fifehezana tsy misy karbonina tsy misy kofehy ary 304 tsy mahazaka vy: tsy maharitra!
② Fiantohana transmissions an'ny fibrain'ny angovo azo avy amin'ny angovo: mampitombo ny fahaiza-manaon'ny fiatrehana ny fanoherana sy ny fikorontanana
③Fanampiana matihanina manokana ny Thyristor, karazana fitsangatsanganana rano (HengYang Patent No.): ampiasaina tsara kokoa!
④Fandrafetana fanamafisana: rafitra horita, fiarovan-tena azo antoka ho an'ny fiarovana, amin'ny fampiasana ny herin'ny maingam-pandehan'ny alimanina maitso, ny fiarovan-tena kokoa sy ny maharitra kokoa.
⑤ Famokarana varahina mahazaka: Ny varimbazaha lehibe, matevina dia mety hampidina ny hafanana ary hamonjy angovo! Kofehy maina sy menaka fanodinana oksidana, ny tontolon'ny fifandraisana dia mitarika kokoa, ny endrika ivelany dia tsy mihena ary mahasarika kokoa!
⑥Isam-bolana (fifanakalozana): rehefa ovina na ovaina ny lafaoro, dia azo atao ny mifehy ny tsy fahampian'ny herinaratra iray ao anaty lafaoro raha tsy misy fiantraikany amin'ny fikarakarana fofona hafa. Ny famolavolana ny fiarovana sy ny maha-olona.
⑦ Fiarovan'ny fifanakalozana hafanana (HengYang Patent No.): mba hiantohana ny fampangatsiahana ny hafanana rano amin'ny fitaovana, ary mba hisorohana ny fidirana ao anaty rano. Mikarakara ny fahombiazan'ny fitaovana.
-Fiarovana ny tontolo iainana
Lafaoro antonony tsy miolakolaka matetika amin'ny alàlan'ny tadio sy ny sisiny manarona fandrakofana lafaoro, arofanina vovoka (peratra) amin'ny alàlan'ny rivotra iray izay mifoka vovoka, entona maloto namboarina tamin'ny fandoroana, nahatratra ary nanatsara ny vokatry ny famoahana setroka, mba hahafeno ny fepetra takian'ny fiantraikan'ny tontolo iainana famolavolana fanombanana.
Safidy sy karazana teknika lehibe:
Input Power (50 / 60HZ) Power output Toniam-bola iray tavoahangy tononina (KWH / T)
Karazana herinaratra EAF Rated power (KW) Incoming voltage (V) Ny laharana manaraka (A) Manitsy ny isa impuls Fanamafisana ny fanamafisana ny transformer (KVA) DC voltage (V) Vokatra mivantana (A) Ny haavon'ny hafanam-be (V) Frequency intermediate KHZ Fotoana fiorenana (minitra) Vatosoa vy Kitapo mena varahina aluminium
GW-0.35T 250 380 400 6 315 fahatelo 500 500 750 1 20-45 560 420 390 540
GW-0.5T 350 380 560 6 400 fahatelo 500 700 750 0.8 30-50 550 410 380 530
GW-0.75T 500 380 800 6 630 fahatelo 500 1000 750 0.8 40-50 550 410 380 530
Double triangulo 1250
Double triangulo 1800
GW-3T 2000 750 820 12 Double triangulo 2500 990 1010 1480 0.5 50-70 510 370 340 490
GW-5T 3000 950 1140 12 Double triangulo 4000 1260 1190 1900 0.3 50-80 500 360 330 480
GW-10T 6000 950 2280 12 Double triangulo 8000 1260 2380 1900 0.3 50-90 490 350 320 470
GW-15T 8000 950 1520 24 Fivarotana fahatelo telo 1260 1590 1900 0.3 50-90 480 340 310 460
GW-20T 10000 950 1900 24 Fivarotana fahatelo telo 1260 1980 1900 0.25 50-90 470 330 300 450
GW-30T 15000 950 2850 24 Fivarotana fahatelo telo 1260 2980 1900 0.25 50-90 470 330 300 450
Mari-pana ao anaty lafaoro: vy 1650 iron vy vy 1450 copper varahina mena 1150 ass varahina 1000 ℃ alimina 700 inc zinc 400 ℃
※ Ny haavon'ny hafanam-pandehan'ny metaly tsy misy fefy dia mifototra amin'ny haavon'ny vy 7.8 (ny alim-by ny alimine dia 2.7, noho izany ny aliminian'ny lanjany mitovy: ny hery mifanaraka aminy dia mitovy, ary ny fahafaha-mitaky x 3 isaky ny vatan'ny fatana )
※ Ny fotoana mifangaro sy ny taonan'ny herin'aratra dia manana fifandraisana manan-danja amin'ny fitaovana mifandraika amin'ny fahefana, endrika matsiro, lamina matanjaka, ny fahaizana miasa,
※ Amin'ny endrika etsy ambony, ny "fanjifana herinaratra taonina (kwh / T)" dia andiana fihinanana herinaratra vaovao, izay handany ny 15% na mihoatra ny famatsiana herinaratra ao amin'ny famatsiana herinaratra IF IF.
※ Fikirakirana fitaovana: famatsian-jiro matetika, kabinetra capacitor, vatan'ny lafaoro (akorandriaka vy na akorandriaka aluminium), rafitra fitifirana (na reducer) rafitra fitongilanana, tariby mangatsiaka rano sns;
※ Ny ambony dia ny angon-drakitra momba ny vokatra serivisy, ka afaka manamboatra hery samihafa araka ny fangatahan'ilay mpampiasa, vokatra tsy misy mari-pamantarana miaraka amin'ny hafainganam-pandehanana.